Madaxweynaha Dowlada Puntland oo ku labisan Dharka Cayaartoyda oo Caawo Casho sharaf u sameeyay Halyeeyada Garowe City Stars
Madaxweynaha Dowlada Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali ‘’Gaas’’ ayaa caawo Madaxtooyada Puntland casho sharaf u sameeyay Halyeeyada Garowe City Stars iyo Hogaamiyahooda Cabdirashiid Xassan Xirsi ‘’Bakin’’.
Casho sharafta ayaa waxa goob joog ka ahaa Madaxweyne ku xigeenka Puntland,Xubno ka tirsan Golaha Xukuumadda iyo Saraakiil ka tirsan Madaxtooyada Puntland.
Dr. Cabdiweli Cali Gaas oo ku labisnaa dharka ay caanka ku yihiin Cayaaryahanada ayaa mid mid u gacan qaaday Xidigaha magaca iyo Maamuuska uso hooyay umada reer Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya.
Wasiirka Wasaaradda shaqada,shaqaalaha dhalinyarada iyo Cayaaraha Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Axmed iyo Madaxweyne ku xigeenka Puntland Puntland Cabdixakiim Cabdulaahi Xaaji Cumar Camay oo ka hadlay goobta ayaa sheegay inay si Kal iyo Laab ah uso dhowaynayaan guusha Taariikhiga ah ee ay soo hoyeen Cayaaryahanada Garowe.
Tababaraha Halyeeyada Garowe City Stars oo ka mid ahaa Mas’uuliyiintii ka hadlay goobta ayaa sheegay in Cayaaryahanada Garowe ay kaalin mug wayn ka galeen Taariikhda kubadda Kolayga Adduunyada,waxaana uu xusay in Puntland ay mar kale cashar u dhigtay Soomaalida.
Madaxweynaha Dowlada Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali ‘’Gaas’’ ayaa sheegay in Cayaaryahnada Garowe City Stars ay baal Dahab ah ka galeen taariikhda Puntland iyo Soomaaliya,waxaana uu xusay in Dowlada Puntland ay ka go’an tahay taageerida Halyeeyada Garowe.
Dr. Gaas ayaa hoosta ka xariiqay in Koobabka iyo Biladahada ay keeneen Cayaaryahanada Garowe ay ka qaalisan yihiin Koobkii ay qaaday Kooxda Kaalinta kowaad ee Masar.
Wajiyada Cayaaryahnada ayaa laga dheehan karay dareen farxadeed,waxayna dareemayeen in muhiim ay tahay in umada reer Puntland ay la wadaagan guusha ay gaareen.
Si kastaba ha ahate,arrimahan ayaa kuso beegmaya xilli reer Puntland ay maanta so wayn Garowe ugu soo dhoweeyen Cayaaryahanada Garowe.